Warbixin cajiib ah oo laga diyaariyey Mohamed Salah iyo sida uu u Caawiyo dadka Muslimka ah – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Warbixin cajiib ah oo laga diyaariyey Mohamed Salah iyo sida uu u Caawiyo dadka Muslimka ah
Sabti, December, 01, 2018(HNN) Maalinta Axadda waxa xidhmi doonta codaynta ciyaartoyga ugu wanaagsan qaaradda Afrika sannadkan oo ay ku loollamayaan Sadio Mane, Mohamed Salah, Mehdi Benatia, Partey iyo Koulibaly.
Abaal-marintan oo ay bixiso BBC, ayaa waxay xiddigaha ku hirdamaya ka diyaarisay warbixino kala duwan oo noloshooda, xirfaddooda iyo hab-dhaqankooda oo ay ku jirto caqiiqadoodu ay ka diyaarisay, waxaananu halkan idiinku soo gudbinaynaa warbixin cajiib ah oo Mohamed Salah laga diyaariyey.
Warbixinta oo dheer ayaanu kasoo qaadnay meelaha ugu muhiimsan ee ay BBC-du dul istaagtay, waxaanay u dhignayd sidan:
Sannadihii u dambeeyey, dalka Masar waxa uu haystay boggaga hore ee warbaahinta sababo kala duwan dartood, sida degganaansho la’aanta siyaasadeed iyo weerarro aragagixiso, laakiin waxa jiray nin arrintaas beddelayey.
Weeraryahanka Liverpool ee Mohamed Salah waxa uu garoomada ku qaatay sannad cajiib ah oo uu noqday ciyaartoyga ugu goolasha badan xili ciyaareedka 2017-18 horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League, sidoo kalena noqday ciyaartoygii ugu degdegga badnaa taariikhda Liverpool ee u dhaliye 50 gool, kaas oo ka caawiyey inay tagto finalka Champions League.
Dibedda garoonka, waxa jira sheekooyin qalbiga kuu qaboojinaya oo ku saabsan 26 jirkan, kuwaas oo aan ka farxinayn jamaahiirta Liverpool oo kaliya, laakiin dhamaan dadka xiiseeya kubadda cagta adduunka oo dhan.
“Mohamed Salah wuxuu ahaa binu-aadam nadiif ah illaa yaraantiisii.” Sidaas waxa BBC Sports u sheegay Hamdi Nooh, oo ah tababaraha kooxda Arab Contractors oo ah naadigii kasoo baxay Mohamed Salah ee carruurnimadiisii oo u ciyaarayay.
“Waxaan idiin sheegayaa qiso aanay dad badan ogeyn. Markii 10 jirka ahaa, marka uu imanayo tababarka kooxdii tuuladiisa ee Basyoum, waxa uu dariiqyada kusoo mari jiray ey illaa garoonka tababarka ku xeersan.
“Inkasta oo uu yaraa, Salah waxa dhaqan u ahayd inuu usoo qaado inuu cunto uga soo qaado gurigooda oo uu garoonka ku siiyo maalin kasta. Waa qof qalbi wanaagsan oo jacayl badan.”
Marka laga yimaaddo qisada uu soo gudbiyey Hamdi, sannadihii ugu dambeeyey wuxuu quudinayey xayawaano uu lacag ku bixiyo, laakiin toddobaadkan horraantiisii wuxuu ka hadlay xayawaano u badan ey iyo bisado oo la sheegay in Masar ay dibedda u iib geyso, arrintaas oo uu kasoo horjeedsaday.
Dhinaca diinta, waxa uu ku yahay deeqsi. Aabo ku sugan dalka Masar ayaa sheegay in Salah uu bixiyey dhamaan kharashkii ku baxay wiil uu dhalay oo laga qalay xanuunka halista ah ee Kansarka.
Waxa kale oo uu lacago badan ku bixiyey xarumo caafimaad oo uu ka furay tuuladiisii Basyoum iyo iskuulo carruurta lagu baro diinta oo uu halkaas ka dhisay.
Lacag dhan $30,000 ayuu ku caawiyey ciyaaryahannadii hore ee xulka qaranka Masar, waxaana u dheer in dalkiisa oo ku jiray qalalaase dhaqaale uu qasnadda ugu shubay lacag dhan $300,000 sannadkii tegay, balse tuulada uu ku dhashay ee Basyoum oo uu ka aasaasay Jimciyad dadka caawisa, waxa uu si toos ah dhaqaale ahaan gacanta ugu hayaa 450 qoys oo biilkooda uu bil walba gaadhsiiiyo.
“Salah marna ma illoobin halka xididkiisu kasoo jeedo, halka ciyaaryahannada kale ay iloobaan qoysaskooda iyo tuulooyinkoodii ay qaniga ka noqdeen” Sidaas waxa yidhi Inas Mazhar oo ka tirsan shaqaalaha dhinaca warbaahinta ee xulka qaranka Masar.
Warbixin cajiib ah oo laga diyaariyey Mohamed Salah iyo sida uu u Caawiyo dadka Muslimka ah added by admin on December 1, 2018